ज्वरोले बर्बराएको रात
आइतवार, आश्विन ३, २०७८ ०१:५६:२७ युनिकोड
शनिवार, श्रावण १६, २०७८ जागरण समाचार
बिहान ४ बजे नै निद्रा खुल्यो । अचानक खोई के जङ चल्यो यो मनलाई । झोलामा एक बोतल पानी हालेर कसैलाई पत्तै नदिई घरबाट निस्किएँ । अनि फटाफट हिँडेर कमल विनायकबाट चाँगुनारायण पुगेँ । त्यहाँबाट तल मनोहरा खोलापारि साँखु देखियो । कुनै उद्देश्यविहीन गोडाहरू मनोहरातिर ओर्ले । साँखु पुगे पछि त्यहाँबाट उत्तरतर्पm दुई पहाडका खोँचमा सुन्दरीजल देखियो । पुनः बागमती नदी पछ्याउँदै सुन्दरीजल पुगेँ । त्यहाँबाट कहाँ जाने आफैँलाई अत्तोपत्तो छैन ।
काठमाडौँ पानी सप्लाई गर्ने सुन्दरीजलको ठूलो पाइपलाइन पछ्याउँदै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार पुगेँ । जहाँ नेपाली सेनाका जवानहरू सुरक्षार्थ खटिएका भेटिए । ‘यहाँबाट तीन घण्टा हिँडेपछि चिसापानी पुगिन्छ ।’ एक सेनाका जवानको कुरा सुनेपछि म चिसापानी पुग्न हतारिन्छु । बाटो पूरै ठाडो उकालो छ । शान्त र एकलास जङ्गलमा कुनै मानिस भेटिँदैन । यो त जनावरहरू पाइने जङ्गल पो हो त १ तर पूरै मार्गमा चराका चिर्रबिरे गीत र गुराँसका फूलसिवाय कुनै पनि जनावर दृष्टिमा ठोक्किएनन् ।
जङ्गल काटेपछि मूलखर्कमाथि चौरवासमा एउटा घर भेटियो । एउटी युवती उक्त घरबाहिर बसेर बाटोतर्फ आँखा फिँजाउँदै थिई । उनीसँग केही क्षणको संवादपछि छुट्टिएँ । निकुञ्जभित्र करिब चार घण्टा हिँडेपछि बोर्लाङ भञ्ज्याङबाट तल चिसापानीको बस्ती देखियो । बाटोको दाहिनेतिर चिसापानीतर्फ नै दृश्य फिँजाउँदै गफमा भुलेका दुई व्यक्ति भेटिए । ‘कहाँ जान लाग्नु भो रु,’ दुईमध्येका एकले प्रश्न गरे । ‘गोसाइँकुण्ड’, मेरो मुखबाट अनायासै शब्द फुत्किन्छ ।
‘ओहो यही तालमा गोल्डस्टार लाएर पुग्न सक्नुहुन्छ त गोसाइँकुण्ड रु दुई–तीन फुटसम्म हिउँ जमेको छ बाटोमा ।’ ती दुवै पर्यटक पथप्रदर्शक रहेछन् । अर्का गाइडको यस्तो अत्यासलाग्दो प्रश्नले मलाई झन् गोल्डस्टारमै गोसाइँकुण्ड पुग्ने हट जाग्यो । सायद यी दुई पथप्रदर्शक बाटोमा नभेटिएका भए म चिसापानीबाटै फर्किने थिएँ कि १ मेरो गोसाइँकुण्ड पुग्ने कुनै पूर्वयोजना पनि थिएन तर अनायासै यिनको चुनौतीपूर्ण प्रश्नको जवाफ खोज्न पनि म गोसाइँकुण्ड पुगेरै छोड्ने प्रण गरेँ । आफ्नै देशको दुई–चार फुट हिउँदेखि पनि तर्सिने भए केको नेपाली रु मनमा यस्तै तर्कना उठे ।
ती दुई पथप्रदर्शकका संवाद केही बेर बसेर सुनेँ । तिनले मलाई बाटोका बारेमा केही जानकारी पनि दिए । अनि उनीहरूकै सल्लाहबमोजिम चिसापानी पुगेर केही प्लास्टिकका झोलाहरू र चाउचाउ, बिस्कुटहरू किनेर ब्यागमा हालेँ ।
चिसापानीबाट अर्को दिन बिहान सबेरै चिया पिएर निस्किएँ । ठाउँ–ठाउँमा बाटो सोद्धै चिप्लिङ हुँदै गल भञ्ज्याङ पुगेँ । बाटामा एकान्त घर र बस्तीहरू भेटिए । भीर, जङ्गल र गुराँसका बुट्टाहरू भेटिए । गाउँ छुट्दै गएपछि करिब तीन–चार घण्टा त एक्लो यात्री भएर होला, अत्यास पनि लाग्यो । त्यही अत्यासले होला, जङ्गलभरि गुराँस फुलेको देख्दा पनि मन खुसी भएन । उल्टै चक्कर लाग्लाजस्तो, बान्ता आउलाजस्तो भएर जीउ नै भारी हुन थाल्यो । पाइला चाल्नै गाह्रो हुन थाल्यो ।
बाटो सामुन्नेको डाँडो हुस्सुले छपक्कै छोपिएको थियो । अत्यासलाग्दो मौसमले जीउ नै जिरिङ्ग हुन थाल्यो । हुस्सुले छोपिएको पहाड कटेपछि मानिसको होहल्ला सुनियो । केहीबेर हिँडेपछि बाटोमा क्याम्पिङ गर्दै हिँडेको एउटा समूह देखा प¥यो । जहाँ आठ–दस विदेशीसँगै १२÷१५ जनाजति नेपाली पनि थिए । यिनीहरू यहाँ खाना खाएर हिँड्न लागेका रहेछन् । त्यही क्याम्पिङ गु्रपका दुई नेपाली गाइडसँग गफिँदै पाइला चाल्छु । तिनले मेरो कुरा सुनेपछि मलाई लेक लागेको हुनसक्ने सल्लाह दिए । हुन पनि म यति उचाइमा पहिलोचोटि हिँड्दै थिएँ । यति लामो बाटो पनि एक्लै हिँडेको थिइनँ । दिउँसोको तीन बजेको थियो । उनीहरूले यहीँ कुटुनसाङमा बास बस्न मलाई सल्लाह दिए । आफ्नो मनस्थिति बुझेर मैले पनि उनीहरूको सल्लाह स्वीकारेँ ।
कुटुनसाङमा जम्मा दुइटा होटल रहेछन् । तीमध्ये म बाटोको पहिलो होटलमा छिरेँ । होटल मालिक शेर्पा रहेछन् । ती शेर्पा दम्पतीले मलाई लेक लागेको पुष्टि गरे र निरन्तर अदुवापानी तताएर दिइरहे । साहुनीले ‘दाइ यो लसुन बी–बीचमा खाइरहनु’ भन्दै मेरो छेउमा लसुन राखिदिइन् । बेला–बेला उनले चिया र खाजा पनि दिइरहिन् । तिनको मप्रतिको सेवा–सत्कार देखेर मैले ‘मुनामदन’ कृतिको पात्र मदनलाई सम्झिएँ । होटलमा छिरेदेखि तिनले मलाई गरेको सेवा–सत्कार आज पनि म झल्झल्ती सम्झिरहेको छु । मानवताको मूल्य साह्रोगाह्रोमै महसुस हँुदो रहेछ । त्यसै उखान पनि कहाँ बनेको छ र – ‘साथी चिन्नु मसानघाटमा ।’ म मसानघाट पुग्न लागेको मान्छेलाई यी पतिपत्नीले उद्धार मात्र गरेनन्, मानवताको पाठ पनि सिकाए ।
शेर्पा दाइ धर्मकर्म र पूजापाठमा हरक्षण तल्लीन देखिन्थे । म होटलभित्र छिर्दा हातमा माला घुमाइरहेका थिए । उनले त्यो माला एकक्षण छाडेनन्, निरन्तर गनिरहे, घुमाइरहे । उनको कार्य देख्दा लाग्थ्यो, गेस्टसँग बोल्दा पनि उनी ध्यानमै छन् । उनीहरूको सेवा–सत्कार र माया–ममताले बेलुकासम्ममा म तङ्ग्रिसकेको महसुस गरेँ । सायद ती कर्मशील दम्पतीका सङ्गतले मलाई ऊर्जा मिलेको हुनुपर्छ ।
बेलुकाको खानामा एउटै टेबलमा भेटिए एक डच जोडी । करिब ७० वर्ष नाघिसकेका जस्ता देखिने यो जोडी ठाडेपाटीबाट माथि उक्लिन नसकेर पदयात्रा त्यागेर फर्केका रहेछन् । तिनीहरूसँग दुई जना पथप्रदर्शक पनि साथमा थिए । संवादका क्रममा तिनका कुरा सुनेर म नाजवाफ भएँ । ती दुई लोग्नेस्वास्नी नभएर प्रेमीपे्रमिका रहेछन् । बूढाकी श्रीमती बिदा मनाउन उसको ब्वाइफ्रेन्डसँग स्विट्जरल्यान्ड गएकी रहिछे । बूढीको श्रीमान् भने आफ्नी गर्लफ्रेन्डसँग छुट्टी मनाउन अस्ट्रिया गएको रहेछ । यी दुई भने यहाँ बिदा मनाइरहेका थिए । खान खाने टेबलमै त्यो बूढो प्रेमी उसकी बूढी पे्रमिकालाई अँगालो मार्दै म्वाइँ खान्थ्यो । बूढी लजाउँदै पन्छिन खोज्थी । यो वृद्ध जोडीको क्रियाकलाप देख्दा लाग्थ्यो, यिनीहरू भर्खरै प्रेममा परेका सोह्रवर्षे ठिटाठिटी हुन् ।
बिहान सबेरै चिया र बिस्कुट खाएर हिँड्ने तरखर गर्दै मैले मेरो हिसाब सोधेँ तर साहुनीले एक पैसा लिन मानिनन् । उल्टै उनीहरूको सेवा–सत्कारको ऋणी बनेर म चढ्न थालेँ ठाडे भन्ने ठाउँको ठाडो उकालो । यहीँबाट बाटोभरि हिउँ छपक्क भेटिन थाल्यो । पहिलोचोटि हिउँतन्नामा टेक्न पाउँदा खुसीले हिउँमै सुत्न मन लाग्यो । पूmलचोकी, नगरकोट र शिवपुरीमा आक्कलझुक्कल हिउँ टेकेको मलाई यहाँ त हिउँकै जङ्गल थियो । होटल र घरहरू हिउँले पुरिएका थिए । ठाडेपाटीको एउटा होटलमा चिया पिउन पस्दा नवीन देवकोटा नामका पथप्रदर्शक भेटिए । उनी दुई इजरायली युवालाई लिएर गोसाइँकुण्ड हिँडेका रहेछन् ।
हिउँले पुरिएको बाटो एक्लै कसरी भेउ पाइएला भन्ने भा’थ्यो तर यहाँ नवीनसँगको भेटले राहत मिल्यो । उनकै साथ लागेर जाँदा बाटामा एकपछि अर्का इजरायली समूह भेटिन थाले । बाटामा भेटिएका पथप्रदर्शकहरूले म एक्लै गोसाइँकुण्ड घुम्न जान लागेको भन्दा पत्याउँदै पत्याएनन् । उल्टै शङ्का गर्न थाले । नवीनले पनि ममाथि शङ्का गर्न थाले । एक ठाउँमा त मुखै खोलेर भने, ‘तपाईंले स्पष्ट भनिदिनु भो भने बरु हामी चन्दा सहयोग गर्न तयार छौँ’ भने । एक–दुई इजरायली त मलाई ‘आर यु नेपाली’ भनेर सोध्न थाले । सायद नेपाली पनि यसरी पदयात्रा गर्छन् भन्ने तिनलाई विश्वास नलागेको पनि हुन सक्छ ।
यहाँ हिँड्दै गर्दा बल्ल बोर्लाङमा भेटिएका दुई पथप्रदर्शकले भनेको कुरा सम्झिएँ । बाटामा कैयौँ ठाउँमा दुई–तीन फुट हिउँमा भासिँदै हिँड्नु प¥यो । उनीहरूकै सल्लाहबमोजिम झोलामा कोचेको प्लास्टिक मोजा बाहिर बेरेर गोल्डस्टार जुत्ता कसेको थिएँ तर पनि कता–कताबाट जुत्ताभित्र हिउँ पसेर खुट्टा काठिएका थिए । मेरा आँखा पनि बिजाउन थालेका थिए । दिउँसो घाममा हिउँ टल्किएर नाङ्गा आँखा हेर्नै गाह्रो हुन थाले । हिउँमा हिँड्दा सनग्लास अनिवार्य रहेछ तर कहाँ यस्तो कुरा मैले भेउ पाउनु ?
घोप्टेको होटलमा पुग्दा रात झमक्कै परेको थियो । यहाँ त हिउँको कुम्भ मेला नै रहेछ । कुनै चिज सेतोभन्दा अर्को रङ देखिएन । होटलको आँगनमै दुई–तीन फुट हिउँ जमेको थियो । होटलभित्र छिर्नेबित्तिकै आगोको वरिपरि भीड जम्यो । कोही जुत्ता सेकाउने, कोही ज्याकेट, टोपी र कोही मोजा सेकाउने । सबैको आ–आफ्नै ध्याउन्न । सानो होटलमा विदेशीको भीड थियो । नेपालीहरू त टेबलकुर्सी जोडेरै सुतियो ।
गुराँसका दाउरा काँचै पनि बल्ने रहेछन् । काँचो रुख काट्दै ल्याएर अँगेनाको छेउछाउ थुपारिएका थिए । त्यही भएर हुनुपर्छ, घोप्टेका ती होटलका सेरोफेरोमा एउटै रुख देखिएनन् । होटल पुग्नुअघि निकै तल बाटोमा एक केटो गुराँसको रुख काट्दै गरेको भेटिएको थियो । पछि उसैले दाउरा ल्याएर अँगेनाछेउमा थुपा¥यो । घोप्टे त्यही ठाउँ थियो, जहाँ सन् १९९२ मा थाई एयरलाइन्सको फ्लाइट ३११ दुर्घटनामा परेर यात्रारत ११३ जना सबैको दुःखद निधन भएको थियो । तिनीहरूकै सम्झनामा ककनीमा स्मृति पार्क पनि बनाइएको छ । नामजस्तै भीरको खोँचमा देखिन्थ्यो दुर्घटना स्थल ।
रातभरि मेरा आँखा जोडिएनन् । दिनभरि हिउँमा टल्केको प्रकाशले मेरा आँखा न हेर्न मिल्ने न चिम्लिन मिल्ने गरी लगातार आँसु मात्र बगिरह्यो । आँखैले काम नगरेपछि यात्रामा के खुसी छाओस् रु दिनभरिको यात्रा फिक्का बन्यो । मलाई ‘चिनी धेरै खाएपछि तीतो हुन्छ’ भनेझैँ हिउँदेखि नै एलर्जी हुन थालेको थियो । बिहान निस्कने बेलामा हिमपात हुन थाल्यो । टाउकोमा प्लास्टिक बाँधेर उकालो लागियो । बाटोमा दुई–तीन फुट हिउँ, खुट्टामा हिउँ, हातमा हिउँ, काँध, टाउको, ब्याग जताततै हिउँ नै हिउँ । शरीर पूरै खस्खस् हुन थाल्यो । आँखा पोलेर त्यस्तै भएका छन् । दृश्य हेर्नुभन्दा चिम्लिन बेस । आक्कल–झुक्कल चिम्लियो हिउँमा चिप्लिएर भीरबाट खसिने डर । थोरै थोरै त कति चिप्लिएँ कति । धन्न त्यस्तो ठूलो सङ्कट आइपरेन ।
लौरीबिनाको उकालो सुनेजस्तो गाह्रो लागेन । लठ्ठी नटेकी चढ्न नसकिने भनेर लौरीबिना नाम रहन गएको भन्ने सुनेको थिएँ तर लौरीबिना नै उकालो काटियो । समुद्री सतहबाट चार हजार ३१० मिटरको उचाइमा हामी पाइला टेक्दै थियौँ । अर्थात् गोसाइँकुण्ड आँखामा छाइसकेको थियो । यही सेरोफेरोमा सात कुण्ड छन् भन्नेको सुनेको थिएँ तर देखिए जम्मा दुई । अन्य कता थिए देख्ने वा हेर्ने इच्छा र जाँगर पनि पलाएन । होटलमा पुग्दा मेरो आँखाको हालत देखेर सबैले मलाई तल सिङ्गोम्पामा गएर बास बस्न सुझाए । म उनीहरूकै सुझाव अनुसरण गर्दै बाटो लागेँ । छेवैमा बाटोको तल खोँचमा त्रिशूली नदी सुसाएको सुनिन्थ्यो । हिउँमा अलिकति चिप्लिए खोँचमा कहाँ पुगिने हो पत्तो थिएन ।
करिब एक घण्टा ओरालो कुँदेपछि बाटोमा हिउँ बिस्तारै निखिँ्रदै जान थाल्यो । हिउँ निख्रिँदै गएपछि यात्रा बल्ल सहज बन्दै गएझैँ लाग्यो । ढकमक्क फुलेका लालीगुराँसका बुट्टाहरू पनि एकपछि अर्को देखिन थाले । यहाँ आइपुग्दा थोरै भए पनि दृश्यमा मन रमाउन थाल्यो । आक्कल–झुक्कल घर र होटलहरू पनि भेटिन थाले ।
गोसाइँकुण्ड र धुन्चेको मध्य स्थानमा सिङ्गोम्पा भन्ने ठाउँ रहेछ । त्यहाँबाट उत्तरतर्फ स्याफ्रुबेँसी जाने बाटो रहेछ । गोसाइँकुण्ड देखि सिङ्गोम्पासम्म एक दिनको पदयात्राको बाटो रहेछ तर म धुन्चे नै पुग्ने सुरले ओरालो दौडिरहेँ । बेलुका करिब ७ बजे म धुन्चे पुगेँ । होटलको बाथरुममा नुहाउन तातोपानीको सुविधा रहेछ । नुहाइदिएँ । हिउँले कठ्याङ्ग्रिएको शरीरमा तातोपानी पर्दा छाला प्यात्त–प्यात्त पिल्सिन पो थाल्यो । आँखा पनि पूरै बन्द भए । राति शरीर आगो भैmँ बलेर पसिना र आँसुले ओछ्यान छ्याप्पै भिझेको थियो । ज्वरोले म कोठामा बर्बराउन पो थालेछु । धन्न होटल मालिकसँग सिटामोल रहेछ र थोरै भए पनि राहत भयो ।
वैशाख ११ गते बिहान भालेको डाकसँगै धुन्चेको सडकमा नागरिकको विजय जुलुसको नारा घन्कन थाल्यो । त्यो दिन २०६२÷६३ को १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको थियो । अर्थात तानाशाह ढलेर लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । मेरा आँखा भने बन्दै थिए । ज्वरोले जीउ कामि रहेकै थियो । शरीर पूरै पाकेर पिप झर्ला जस्तो भएको थियो । अनुहार भरि खटिरा आएका थिए । ओठ सुन्निएर अनुहार नै कुरूप बनेको थियो तर नयाँ बिहानीसँगै आएको परिवर्तनको गुञ्जायसले मन त्यसै–त्यसै चङ्गा हुँदै गयो । गोरखापत्रबाट साभार
प्रकाशित मिति: शनिवार, श्रावण १६, २०७८, १०:१२:००
अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउला? एक साता पर्खौं!
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अत्यधिक गर्मी
मेलम्चीको सपना देख्‍ने किसुनजीलाई ओलीले बिर्से, राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झिइन्
कोरोना खोप अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन बिहिवार, भदौ १७, २०७८ 165